Xfdesktop 4.15 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ ya na mgbanwe ya | Site na Linux
Xfdesktop 4.15 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ ya na mgbanwe ya
Naanị webatara ntọhapụ nke ụdị ọhụrụ nke njikwa desktọọpụ xfdesktop 4.15.0 nke ejiri n’ime gburugburu onye ọrụ Xfce ime akara ngosi na desktọọpụ na hazie ndabere oyiyi.
Ọzọkwa, XFCE mmepe weputara n'out oge na-ahapụ ụdị ọhụrụ nke njikwa faịlụ ahụ Ochie 4.15.0, onye mmepe ya lekwasịrị anya n'ịhụ oke ọsọ na nzaghachi, jikọtara ya na inye interface dị mfe iji.
Tupu ị mata mgbanwe nke ụdị ndị ọhụrụ ahụ, ọ dị mkpa iburu n'uche na ụdị dị iche iche dị na ọrụ a rụrụ n'ime ọrụ XFCE bụ nsụgharị ndị a na-ewere dị ka "nsụgharị nnwale" nke ewepụtara iji wee gochaa ma chọta ahụhụ na nkọwa tupu ntọhapụ nke "anụ version" nke bụ mgbe "version" ụdị.
1 Kedu ihe ọhụrụ na xfdesktop 4.15?
2 Kedu ihe ọhụrụ na Thunar 4.15.0?
Kedu ihe ọhụrụ na xfdesktop 4.15?
Nke mgbanwe na xfdesktop 4.15, ekwuru ya na ọkwa na ụfọdụ akara ngosi na-emelite, opekempe akara ngosi akara na-abawanye na 16.
E wezụga nke ahụ igbanwe site na exo-csource ka xdt-csource emeela, na-achọpụta na ewepụrụ nhọrọ niile mgbe otu pịa.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara ìhè bụ na agbakwunye Shift + Ctrl + N hotkey iji mepụta akwụkwọ ndekọ aha. Agbakwunyela akara ngosi dịka ị pịnyere, yana idozi chinchi na idozi ebe nchekwa. Ntụgharị asụsụ emelitere, gụnyere asụsụ Russian, Belarusian, Ukraine, Kazakh na asụsụ Uzbek.
Kedu ihe ọhụrụ na Thunar 4.15.0?
Banyere ozi ọma na mgbanwe ndị egosiri na ụdị ọhụrụ nke njikwa faili a, ha bụ nke ahụ a gbanwere nọmba ya n'oge a maka Thunar onye njikwa faịlụ dị ka nsụgharị ugbu a aha ya na ntụnyere na ihe ndị ọzọ Xfce (mgbe 1.8.15, 4.15.0 mepụtara ozugbo). E jiri ya tụnyere alaka 1.8.x, nsụgharị ọhụrụ ahụ na-arụ ọrụ iji kwado ma mezie arụmọrụ ahụ.
Na mgbakwunye, n'etiti ọmarịcha ndozi nke ụdị ọhụụ a, anyị nwere ike ịchọta nke ahụ enwere ike iji mgbanwe gburugburu ebe obibi (dịka ọmụmaatụ, $ HOME) na adreesị mmanya.
Agbakwunyere otu nhọrọ iji nyegharịa faịlụ ahụ depụtaghachiri ma ọ bụrụ na ị gafere ụzọ ga-esi jiri aha faịlụ dị ugbu a.
E wepụrụ ihe ndị "Sort by" na "View dị ka" site na onodu menu. A na-ejikọta menus niile gburugburu ya n'otu ngwugwu.
Na na-ezo gam akporo ngwaọrụ site na otu ìgwè nke netwọk ngwaọrụ, na mgbakwunye na "otu" otu a kwagara na ala.
Koodu nkewa maka uzo nke faịlụ abanye na ihe nkpuchi bu ihe enweghi ike;
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-apụta ìhè na ad:
Gbakwunye bọtịnụ ịkwụsịtụ ịkwaga ma ọ bụ detuo ọrụ.
Deptreated GtkActionEntry dochie XfceGtkActionEntry.
Na thumbnail ngosi mode, ike ịgbanwe faili site na ikpuru na dobe.
The vetikal size nke dialog na template ozi e belata.
Agbakwunyere ihe nrịbama ọhụrụ na njedebe nke usoro ụzọ ndị a na-ahụkarị.
Omume desktọọpụ agbakwunyere (omume desktọọpụ) maka ndekọ ụlọ, nchịkọta usoro (kọmputa: ///), na imegharị biini.
Mgbe egosiri osisi faịlụ, ihe ngosi mgbọrọgwụ na-akwụsị.
Mgbakwunye agbakwunyere iji mechie taabụ dị iche iche dabere na libxfce4ui.
Agbakwunyere nkwanye okwu ọ bụrụ na ị gbalịrị imechi windo na ọtụtụ taabụ.
E tinyela akara ngosi ihe atụ maka ọrụ mwepụ ngwaọrụ.
Mma imewe nke ikike ikike nhazi taabụ;
Etinyere ntọala iji gbanye ma gbanyụọ okpokolo agba.
Indinging n'etiti wijetị na dialogs na ntọala e kachasị.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọkwa nke nsụgharị ọhụrụ ndị a, ị nwere ike ịkpọtụrụ ha site na ịga na njikọ ndị a.
Xfdesktop 4.15.0 ọkwa
Thunar 4.15.0 ọkwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Xfdesktop 4.15 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ ya na mgbanwe ya
RPi-VK-Draịvụ: onye njikwa GPU na nkwado Vulkan maka mbadamba RPI ndị okenye